Hargeysa: Wariye Asbuucii Labaad u Xiran Su’aasha “khamrigu ma ku Wiiqay” iyo Cadaadiska CPJ – Radio Daljir
Juunyo 2, 2017 10:16 b 0
New York – Guddiga badbaadinta suxufiyiinta ee (CPJ) ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta maamulka Soomaaliland in la siidaayo Tafaftiriha Horseed Media, Maxamed Aadan Dirir.
Maxamed ayaa maxkamad la’aan xiran tan iyo 24 May, xilligaasi oo uu ciidanka ammaanka in la xiro ku amray wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Xaglotoosiye oo uu weriyuhu su’aal ku waydiiyey shir jaraa’id.
Gudoomiyaha xafiiska xuquuqul insaanka Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac ayaa u sheegay CPJ in su’aasha uu weriyuhu ka waydiiyey wasiirka waxqabadkisa ay ahayd mid la xiriirta isticmaalka khamriga oo Soomaliland ka mamnuuc ah iyo sida ay u wiiqday shaqada Wasiirka. Su’aashu waxay sababtay in wasiirku ku xanaaqo wariyuha, dalbadana xariggiisa.
Dastuurka iyo shuruucda Soomaaliland ayaa faraya madaxda in maxkamad la soo taago ama la sii daayo eedaysanayaasha muddo 48 saac gudohood ah.
CPJ ayaa sheegtay in wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cusmaan Cabdullaahi uusan wax jawaab ah ka bixin wicitaanada iyo fariimaha dhanka telefanka ah ee kaga imaanaya CPJ.
Warka oo faahfaahsan kaga bogga CPJ